Vavaka ho an'ny virjin'i Fatima. ? Fahagagana sy Mahery! [+]
Vavaka ho an'ny Virjiny an'i Fatima; Raha mila anao dia afaka manangana an'io vavaka io ianao.
Ny fitiavana sy ny fahalalahan-tanan'i Virjin'i Maria amin'ny iray amin'ireo fanehoana azy maro dia mahery tokoa.
Izy, amin'ny maha renin'i Jesosy Kristy Tompontsika sy sakaizan'Andriamanitra, izay nahary ny zava-drehetra, dia afaka mangataka ho antsika any an-danitra ka hahazo sitraka na fahagagana ilaintsika tokoa.
Ny vavaka isan'andro dia azo atao, miaraka amin'ny fianakaviana, ao an-trano, ao amin'ny birao na tsotra manao fehezanteny tonga ho azy.
Ny zava-dehibe dia ny fanaovana izany miaraka amin'ny finoana azo antoka fa mihaino antsika izy ary hanampy ny fiantsoanay fanampiana.
1 Vavaka ho an'ny virjin'i Fatima Iza no virjin'i Fatima?
2 Vavaka ho an'ny virjin'i Fatima
2.1 Inona ny fivavaky ny Virjin'i Fatima?
3 Rahoviana aho no afaka mivavaka?
4 Hanampy ahy ve io virijina io?
Vavaka ho an'ny virjin'i Fatima Iza no virjin'i Fatima?
Voalaza fa tamin'ny taona 1917 dia nahita an'i Francisco, Lucía sy Jacinta ilay virjiny izay fantatra fa mpiandry telo ny Virjin'i Fatima.
Izany dia nitranga tao amin'ny tanàna portogey izay mitondra ny anarany mitovy amin'ilay virjiny.
Ny antsipiriany mahaliana hafa momba ilay tantara dia milaza fa ny anjely iray fantatra amin'ny anarana hoe Angel de Portugal, dia nifandray tamin'ny mpiandry ondry kely herintaona talohan'izay ary nikasa ny hanomana azy ireo amin'ny fisehoan'io virijina io.
Ny Virjiny dia nanambara tsiambaratelo telo tamin'ireo mpiandry ondry ireo izay nanambara azy ireo tsikelikely tamin'ny mpino hafa.
Fantatra fa tamin'ny taona 2000 dia nambaran'i Cardinal Ángelo Sodano ity farany.
Ny marina dia taorian'ny fisehoany voalohany, ny Virjin'i Fatima dia arahin'ny mpino an'arivony amin'ny fitambarany el tontolo, olona nila fahagagana ary io virijiny io Izy no nanome ny vavolombelona mahatoky ny heriny.
Ry Virjiny Misaotra, niseho tamina ankizy matetika ianao; Tiako ny hahita anao, henoy ny feonao ary lazao aminao: Neny, ento any an-danitra aho.
Matoky ny fitiavanao aho, mangataka aminao aho mba hanomeo an'i Jesoa Zananao ahy finoana velona, ​​faharanitan-tsaina hahafantatra sy tia azy, faharetana sy fahasoavana hanompoana ny rahalahiko, ary indray andro iray hahafahanao hiray Aminao any an-danitra.
Ry Rainay, Arahaba Maria sy Voninahitra.
Ry Neny, hangataka anao ho an'ny ray aman-dreniko aho mba hiarahan'izy ireo miaraka amin'ny fitiavana; ho an'ny rahalahiko, ny fianakaviako ary ny namako, mba hiarahantsika miara-miaina miaraka amin'ny fiainana mandrakizay miaraka amin'ny fiainana mandrakizay.
Manontany anao amin'ny fomba manokana aho ho amin'ny fiovan'ny mpanota sy ny fiadanan'izao tontolo izao; ho an'ny ankizy, mba tsy hananany fanampiana avy amin'Andriamanitra sy izay ilaina amin'ny vatany, ary afaka hahatratra ny fiainana mandrakizay izy ireo indray andro.
Ry Raiko, Arahaba Maria sy Voninahitra Oh Neny, fantatro fa hihaino ianao, ary handray ahy ireo ary be ny soa azoko aminao, satria mangataka ny fitiavanao an'i Jesosy Zananao aho.
Reniko, ity zanakao lahy ity, ho tonga Neny! Ry Ry Masin'i Maria, vonjeo aho!
Ny vavaka vavaky ny Virijin'i Fatima dia mahagaga.
Ao amin'ny soratra masina, ilay raim-pianakaviana any an-danitra dia mampanantena fa hamaly ny vavakay rehetra isaky ny atao amin'ny finoana sy avy amin'ny fo, izany hoe am-pahatsorana.
Raha ny momba ireo vavaka izay natolotry ny Virijin'i Fatima, ity fampanantenana ity dia vao maika mahery vaika satria isika dia miresaka momba ilay andriamanitra Mary virjiny izay renin'i Jesosy.
Ho fanampin'izany rehetra izany dia ny fisehoan'io Virjiny io amin'ny zaza telo ary avy eo ho an'ireo olona, ​​toa antsika, nanana filàna ary nila niditra an-tsehatra avy amin'ny andriamanitra teo amin'ny fiainany.
Dia afaka mino isika fa toy ny nitranga tamin'ny lasa dia mety hitranga koa izany ankehitriny.
Inona ny fivavaky ny Virjin'i Fatima?
Ny vavaky ny Virjin'i Fatima dia afaka manana tanjona maro mandritra ny fotoana sasany eo amin'ny fiainantsika, noho izany ny herin'ny vavaka dia tsy voafetra amin'ny zavatra iray.
Avy eo isika dia afaka milaza fa, toy ny vavaka rehetra, ity olona ity koa dia afaka misy fanampiana mila izany.
Na fanasitranana mahagaga, ho fiarovana ary hangatahana fangatahana dia mivavaka be dia be ny vavaka.
Mety ho lasa ela ny valiny, satria fantatry ny zotom-po ny hitahiany antsika, ny zava-dehibe dia ny tsy hanary finoana ary ho azo antoka fa ity vavaka ity dia mameno antsika amin'ny fiadanam-be eo afovoan'ny rivo-mahery izay atrehintsika ary afaka mampahafantatra antsika zavatra maro Tsy azontsika aloha.
Ny vavaka dia azo atao amin'ny fomba rehetra, na dia tsy afaka mandamina aza ny mpandidy. vavaka ao anatin'ny fianakaviana na tanjona manokana momba ny vavaka.
Na izany aza, ny tsirairay amin'ireo endrika ireo dia azo alamina amin'ny fomba maro ary azo atao koa vondron'ny namanao na fianakaviana.
Amin'izay fotoana izay dia misy ireo tsy manana fahalalana hanao vavaka manokana, amin'io tranga io dia afaka manao vavaka tsotra sy amin-kitsimpo miaraka amin'ny finoana ianao amin'ny fotoana sy toerana rehetra.
Amin'ny alalan'ny finoana no ahafahantsika mahazo antoka fa mirotsaka amintsika ny virijina.
Eny, isaky ny mila izany ianao.
Amin'ny maha reny tsara azy dia mitarika antsika ireo zanany izy ary manome izany fangatahana izany ao am-pontsika.
Ny sasany izay tsy fantatsika nefa mila maika.
Mino ny Bokin'i Môrmôna izy vavaka mahagaga ho an'ny Virjin'i Fatima.
Vavaky ny fahagagana ho an'ny Virijin'i Guadalupe